ပင်ကိုယ် သဘာဝအလှတွေကို ပေါ်လွင်စေတဲ့ ဝတ်စုံလေးနဲ့ လှရက်လွန်းနေတဲ့ မမဆောင်း – Zartiman
ပင်ကိုယ် သဘာဝအလှတွေကို ပေါ်လွင်စေတဲ့ ဝတ်စုံလေးနဲ့ လှရက်လွန်းနေတဲ့ မမဆောင်း
ယနေ့မှာလည်း မမဆောင်းက သူမရဲ့ တောင်းတင်းလှပတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာ ကောက်ကြောင်း အလှကို ပိုမိုပေါ်လွင်စေတဲ့ မြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့ ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ ပိုစ့်ပေး ဓါတ်ဖမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စာဖွဲ့မမှီလောက်တဲ့ မမဆောင်း ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေက ကြည့်မိသူ ပရိသတ်တိုင်း ကို အချစ်ပိုမိစေ မှာဖြစ်လို့ ပြန်လည် တင်ဆက်ပေး လိုက်ပါတယ်နော်. ။ ကဲ…ချစ်ရတဲ့ ပရိသတ်ကြီးက လည်း မမဆောင်းရဲ့ ဆက်လက် လျှောက် လှမ်းမယ့် အနုပညာလှုပ်ရှား မှုတွေကို အားပေး လိုက်ကြပါဦးနော်… ။
မမဆောင်းလို့ အများက ချစ်စနိုးနဲ့ခေါ်ကြတဲ့ သရုပ်ဆောင် မင်းသမီး ဆောင်းအိနြေ္ဒထွန်း ကတော့ လက်ရှိ လူမှုကွန်ယက် စာမျက်နှာထက် မှာ သူမရဲ့ အင်တာဗျူး ဗီဒီယိုဖိုင်တွေက ပရိသတ်တွေကြား နာမည်ကျော်ကြားလျက်ရှိနေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ Music video တွေမှာ ပါ ဝင်သရုပ်ဆောင်လေ့ရှိတဲ့ မမဆောင်းက ဗီဒီယို ဇာတ်ကားတွေမှာလည်း ရိုက်ကူး ခဲ့ပြီး ပရိသတ်အားပေးမှု ရရှိထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပွင့်လင်းပြီး စိတ်ရင်းကောင်း တဲ့ မမဆောင်းရဲ့ အပြောလေး တွေက ပရိသတ်တွေကို အချစ်ပိုစေတာဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာလည်း အနုပညာ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ယခင်က ထက် ပိုမိုလုပ်ကိုင်နေတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ အမြဲလိုလို ရိုးရှင်းလှပတဲ့ မြန်မာဝတ်စုံလေးတွေကိုသာ ရွေးချယ်ဝတ်ဆင် တတ်တဲ့ မမဆောင်းက ကျက်သရေရှိပြီး ကြည့်ကောင်း နေတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ယနမှေ့ာလညျး မမဆောငျးက သူမရဲ့ တောငျးတငျးလှပတဲ့ ကိုယျခန်ဓာ ကောကျကွောငျး အလှကို ပိုမိုပျေါလှငျစတေဲ့ မွနျမာဝတျစုံလေးနဲ့ ဆှဲဆောငျမှု ရှိရှိ ပိုဈ့ပေး ဓါတျဖမျးနတောလညျးဖွဈပါတယျ။ စာဖှဲ့မမှီလောကျတဲ့ မမဆောငျး ရဲ့ ပုံရိပျလေးတှကေ ကွညျ့မိသူ ပရိသတျတိုငျး ကို အခဈြပိုမိစေ မှာဖွဈလို့ ပွနျလညျ တငျဆကျပေး လိုကျပါတယျနျော. ။ ကဲ…ခဈြရတဲ့ ပရိသတျကွီးက လညျး မမဆောငျးရဲ့ ဆကျလကျ လြှောကျ လှမျးမယျ့ အနုပညာလှုပျရှား မှုတှကေို အားပေး လိုကျကွပါဦးနျော… ။
မမဆောငျးလို့ အမြားက ခဈြစနိုးနဲ့ချေါကွတဲ့ သရုပျဆောငျ မငျးသမီး ဆောငျးအိန်ဒွထှေနျး ကတော့ လကျရှိ လူမှုကှနျယကျ စာမကျြနှာထကျ မှာ သူမရဲ့ အငျတာဗြူး ဗီဒီယိုဖိုငျတှကေ ပရိသတျတှကွေား နာမညျကြျောကွားလကျြရှိနတောကို တှရေ့ပါတယျ။ Music video တှမှော ပါ ဝငျသရုပျဆောငျလရှေိ့တဲ့ မမဆောငျးက ဗီဒီယို ဇာတျကားတှမှောလညျး ရိုကျကူး ခဲ့ပွီး ပရိသတျအားပေးမှု ရရှိထားတာ ဖွဈပါတယျ။
ပှငျ့လငျးပွီး စိတျရငျးကောငျး တဲ့ မမဆောငျးရဲ့ အပွောလေး တှကေ ပရိသတျတှကေို အခဈြပိုစတောဖွဈပွီး လကျရှိမှာလညျး အနုပညာ လှုပျရှားမှုတှကေို ယခငျက ထကျ ပိုမိုလုပျကိုငျနတောကိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။ အမွဲလိုလို ရိုးရှငျးလှပတဲ့ မွနျမာဝတျစုံလေးတှကေိုသာ ရှေးခယျြဝတျဆငျ တတျတဲ့ မမဆောငျးက ကကျြသရရှေိပွီး ကွညျ့ကောငျး နတောလညျး ဖွဈပါတယျ။
မိမိုက်လွန်းတဲ့ဖက်ရှင်လေး နဲ့ ကပြထားတဲ့ ခက်ဝေမိုး ရဲ့ အလန်းစားအကြမ်းစား ဗီဒီယို